Ernesto Valverde Oo Shaaciyey In Qof DUMAR Ah Ay Tababare U Noqon Doonto Barcelona – Latest Sports News
Ernesto Valverde Oo Shaaciyey In Qof DUMAR Ah Ay Tababare U Noqon Doonto Barcelona
Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona, Ernesto Valverde ayaa shaaciyey in Barcelona ay tababare u magacaabi doonto qof dumar ah mustaqbalka dhow.
Ernesto Valverde oo ka hadlayey shir jaraa’id oo uu qabtay maanta oo ku beegnayd xuska maalinta haweenka dunida, ayaa waxa uu kale oo uu tilmaamay in kubadda cagta adduunku ay sannadihii ugu dambeeyey hore u qaadday tallaabooyin muhiim ah oo wax walba suurtogal ka dhigaya.
Valverde oo kooxdiisu ay raadinayso inay difaacato horyaalka LaLiga, sidoo kalena finalka taagan tartanka Copa del Rey iyo Champions League oo ay lugta labaad ee wareegga 16-ka la ciyaari doonto Lyon oo kulankii hore ee dalka France ay kusoo kala baxeen 0-0.
Macallinkan oo dhawaan saxeexay heshiis cusub oo kusii haynayo shaqada Barceona illaa dhamaadka xili ciyaareedka dambe ee 2019-20, ayaa waxa uu yidhi: “Runtu waxay tahay in kubadda cagtu ay tallaabooyin waaweyn hore u qaadaysay muddooyinkan dambe. Cidina ma hor istaagi karayso horumarka ay dumarku samaynayaan.
“Kubadda dumarku waxay samaynaysay hormar cajiib ah, waxaana jira tusaalooyin si cad u muujinaya waxa la gaadhi doono. Kubadda raggu waxa daawasheeda yimaadda dad badan, waana in sare loo sii qaado.”
Tababare Valverde intaas kaddib waxa uu tibaaxay in Barcelona ay tababare dumar ah magacaabi doonto, waxaanu yidhi: “Waxa la gaadhay waqtigii ay haweenay tababare ka noqon lahayd Barca”
Dhinaca kale, madaxweynaha Barcelona, Josep Maria Bartomeu oo ka hadlayey maalinta haweenka ayaa sheegay in shaqaalaha naadigooda ay boqolkiiba 44 yihiin dumar.